ट्विंकल खन्नालाई अक्षय कुमारको गिफ्ट, कानमा प्याजको रिङ
बलिउडका चर्चित अभिनेता अक्षय कुमारले ट्वींकल खन्नालाई प्याजको एयररिङ उपहार दिएपछि सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । प्याजको बढ्दो मूल्यलाई लक्षित गर्दै प्याजलाई विभिन्...
८० हजारको पहिरनमा सजिएकी आलिया [तस्वीरसहित]
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट कपडाको कारण अहिले चर्चामा छिन् । अहिले महँगो ड्रेसका कारण उनको चर्चा चुलिएको हो । हालै उनी ‘वी द विमेन&rsquo...
जोनिफरले गराइन् ग्लामरस फोटोशूट [फोटोसहित]
टीभी एक्ट्रेस जेनिफर विन्गेट आफ्नो ग्लामरस लुकका कारण बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमा छाइरहन्छिन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको अकाउन्टमा हालै एक अन एडिटेड फोटो श...
बुटवलस्थित कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा विसं २०३४ सालमा रमाइलो मेला लागेको थियो । मेला भर्न विभिन्न ठाउँबाट हजारौं मानिसहरू आएका थिए । त्यतिबेला बुटवलका प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारिका उदय र भगवानदासले सिनेमा देख...
बक्स अफिसमा पानीपतले गर्न सकेन राम्रो व्यापार, पहिलो दिनमा कति कमायो ?
अर्जुन कपूर – कृति सेनन मल्टीस्टारर चलचित्र पानीपत सार्वजनिक भइसकेको छ । चलचित्रमा राम्रो प्रतिक्रिया आयो । यद्यपी बक्स् अफिसमा भने यसको व्यापार खासै भएन । ट्रेड एक्स्पर्ट राज बंसलले चलचित्रको पहिल...
बक्स अफिसमा 'पति पत्नी और वो' को शानदार शुरूवात, पहिलो दिनमै कमायो यति धेरै
कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर र अनन्या पाण्डे अभिनित चलचित्र 'पति पत्नी और वो' ले बक्स अफिसमा शानदार शुरूवात गरेको छ । फिल्म एनालिस्ट राज बंसलका अन...
साउथ मूभिजकी चर्चित नायिका रम्या पान्डियन आफ्नो अर्थनग्न तस्वीरका कारण अहिले चर्चामा छिन् । उनले हालै आफ्ना केही तस्वीरहरू इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी थिइन् । तस्...
रानूपछि २ वर्षीया बालिकाले गाइन् लता मंगेशकरको गीत, भिडियो भयो भाइरल (भिडियोसहित)
सामाजिक सञ्जालका कारण रानू मण्डल भाइरल भइन् । उनले गाएको लता मंगेशकरको 'एक प्यार का नगमा है' गीतले उनको चर्चा रातारात चुल्यायो । उनको ...
सारालाई पत्नी बनाउन चाहन्छन् कार्तिक, यस्तो खुलासा गरे [भिडियोसहित]
बलिउड अभिनेता कार्तिक आर्यन र सारा अली खानको जोडी सबैले चर्चा गर्छन् । यो जोडीको कामको प्रशंसा पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । अहिले पनि उनीहरूका फ्यान...
श्रुतिको यो तस्वीर भयो भाइरल
बलिउड अभिनेत्री श्रुति हसन सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन् । उनले नियमित जसो सामाजिक सञ्जारमा आफ्नो तस्वीर शेयर गरिरहन्छिन् । श्रुतिले ...
दिशा पाटनीले इन्स्टाग्राममा राखिन् बोल्ड तस्वीर
बलिउड अभिनेत्री दिशा पाटनी आफ्ना ग्ल्यामरस लूक्सका कारण चर्चाको केन्द्रमा रहिरहेकी हुन्छिन् । अनि सामाजिक सञ्जालमा पनि उनी निकै सक्रिय छिन् र आफ्ना हट तस्वीरहरू स...
प्रियंका र निकको परिवारमा नयाँ सदस्यको 'इन्ट्री', भाइरल भयो भिडियो [भिडियोसहित]
बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा र निक जोनासको जोडी समयसमयमा चर्चामा आइरहन्छन् । गत वर्ष प्रियंका र निकको विवाह भएको थियो । जसको फोटो र भिडियोले सामाजिक सञ्जाल...
पर्यटकीय स्थलहरू चिनाउन चलचित्र 'बुकी'
बाग्लुङमा रहेकाे पर्यटकीय स्थलहरू चिनाउन नेपाली चलचित्र बुकी निर्माण हुने भएकाे छ । जिल्ला भरका पर्यटकीय स्थलहरुलाई चलचित्र मार्फत प्रचार प्रसारमा ल्याउ...
सुनील शेट्टी भन्छन् : गीत सुनेर रुने गर्छु
सुनील शेट्टी चलचित्र उद्योगमा विगत २७ वर्षदेखि निरन्तर छन् । उनलाई अहिलेसम्ममा सबैभन्दा बढी याद रहने आफ्नो भूमिका भने १९९७ मा रिलिज भएको चलचित्रको छ । ...
केएल टावरको एफ क्युब सिनेमा हलमा नयाँ ४के प्रोजेक्टर जडान
मल्टिप्लेक्स सिनेमामा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने लहर चल्दै गर्दा चाबहिल चुच्चेपाटीस्थित केएल टावरको एफ क्युब सिनेमाजको क्युब ३ हलमा शुक्रवारदेखि नयाँ ४के प्रोजेक्टर...
प्रियंका चोपडाको एउटा तस्वीरले सामाजिक सञ्जालमा उठ्यो सवाल
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा शेयर गरेको एउटा तस्वीरलाई लिएर उनका समर्थकले सवाल उठाएका छन् । अभिनेत्री प्रियंकाले कार चलाउ...
भाग्यले साथ नदिएको युवक राज किशोर (जोन अब्राहम) र उसका साथीहरू जंकी (अरशद वारसी) अनि चन्दु (पुलकित सम्राट) लाई अपराध नाइकेहरू राजा (सौरभ शुक्ला) र वाईफा...
म आफ्नै क्षमताले उपकुलपति भएको हुँ, कुनै दलको आर्शिवादले होइन - उपकुलपति प्रा.डा. सिंह
कोरोना संक्रमितलाई औषधि पुर्‍याउने रोबोट
विस्फोटनपछि लेबनानको राजधानी बेरुतबाट ३ लाख मानिस विस्थापित
बर्खामा गाडि चल्न छाडेपछि
सरकारी कर्मचारीको नि:शुल्क कोरोना बिमा
एनआईसी एसियाको सुपर चामत्कारिक कर्जाको फाइदा जाँच्न ‘लोन बेनिफिट क्याल्कुलेटर’ सार्वजनिक
ओली-प्रचण्डबीचको भेटवार्ता स्थगित
प्रचण्ड-नेपाल खेमाको स्पष्ट सन्देश- छिनोफानो अब बहुमतबाटै !